I-Easiest and Most UlungelelWeb Tools Scraping Tools - Semalt Opinion
Izixhobo zokucoca iWebhu zisetyenziselwa ukuqokelela,. Uninzi lweenjini zisebenzisela ukukhangela amaphepha ewebhu kwaye ufumane ukuba umnatha uthetha ntoni ngoku. Kubasebenzisi abangekho bobugcisa, kunzima ukwazi ukuba yeyiphi izixhobo zewebhu zixhobo ezilungileyo. Ngokwahlukileyo, abaphandi beemarike kunye neenkampani ze-analytics basebenzisa i-software yokwenza i-web scraping kunye ne-software ye-crawler ukuze benze imisebenzi yabo, kwaye abanenkinga yokukhetha isisombululo esifanelekileyo.
1. I-Hub yokuKhupha:
I-Hub yokuKhupha i-add-on Firefox eneenkcukacha ezininzi zokukhutshwa kwedatha kunye nezixhobo zokukhwela kwiwebhu. Yenza lula uphando lwakho lwewebhu kwaye lugcine idatha echitshiweyo ngendlela efanelekileyo neyithembekileyo. I-Outwit Hub ine-interface yolondolozo lomsebenzisi kwaye inokukrazula i-website yonke kwimizuzu embalwa. Ingomnye wezona zixhobo eziphambili kunye nezilula kwiwebhu kwi-intanethi.
2. Ngenisa. Io:
Yisithuba samahhala sesiqendu esivumela ukuba iiblogs okanye iiwebhusayithi zithintele ngokwengxenye okanye ngokupheleleyo kwi disk ekhuni. Isixhobo se-web crawler sichaza amaphepha ewebhu athile kwaye igcina umgangatho weedatha ezikhethiweyo ngaphambi kokuyikhuphela kwidivaysi yakho. Unokwenza izicwangciso ezahlukeneyo ukucwangcisa indlela i-site yakho eya kukhwela ngayo. Ngenisa. Io ayinayo i-DOM okanye iDavaScript.
I-Scraperwiki ngumqhubi wewebhusayithi owaziwayo oza ngaphandle kweendleko. Inika iinkcukacha ezichanekileyo ngokukhawuleza kwaye iyafumaneka kwiinkqubo ze-Linux, Windows, Unix kunye ne-Sun Solaris. Ukusebenzisa i-Scraperwiki, unokukhupha iifayile, iifoto kunye namavidiyo ngokulula ngaphandle kwemfuneko yekhowudi. Ukuxhaswa kweproxy kwakhona kuyatholakala kunye nale sixhobo ye-web-crawler ukuze ukwandise isantya kwaye uqinisekise ukuqinisekiswa.
I-Octoparse inamandla kakhulu i-web scraper . Kuyafaneleka kuzo zonke iintlobo zeenkcukacha kwaye ihlala ifumana iziphumo ezichanekileyo. Ingqungquthela ingasetyenziselwa ukuqhathanisa iiwebhusayithi kunye nobuchule bayo obubanzi kunye nokusebenza kwazo. Inamamodi amakhulu aphezulu (Imoji ephezulu kunye neWindows Mode) kwaye ifanelekile kubo bobabini abaprogram kunye nabangabinkqubo. I-I-point-and-click-UI ikuvumela ukuba ubambe idatha yakho kwifom yokubhaliweyo, i-HTML, kunye ne-Excel kwaye uyikhuphe kwi disk yakho yimizuzu ngemizuzwana.
UKimono ungomnye wezona zinto zilungele kwaye zilula ukuyisebenzisa kwi-website ye-crawlers kwi-net. Ungayisebenzisa ukutsala amaninzi amaninzi kunye neeblogi kwaye ukhupha yonke indawo kwi diski yakho. Kuyaziwa ngokuba ngumsebenzisi-friendly interface. Emva kokuba uqalise uKimono, uya kukwazi ukungena i-URL uze uqokomise idatha ofuna ukuyifumana. Iya kugcina idatha echongiweyo igcinwe kwisiseko sayo ukuze ukwazi ukuyisebenzisa nayiphi na ixesha naphi na. UKimono uxhasa iilwimi ezingaphezu kwe-13 kwaye unikela inkxaso ye-FTP kubasebenzisi bayo.
I-Mozenda yandiswa ngokubanzi kunye nemisebenzi emininzi kunye neempawu. Ku luncedo kubaphenyi beedatha, abathengisi be-digital kunye nabaprogram. Unako ukuthumela idatha yakho kwi-spreadsheets ye-Google, kwaye iMozenda ayisoze yahlaziya mgangatho. Isixhobo esikhulu kubo bobabini abaqalayo kunye neengcali ezisebenza ngqo kwi-browser yakho Source .